सडकमा जुलुस निकाल्ने भए लकडाउन किन प्रधानमन्त्रीज्यू ? Canada Nepal
क्यानाडानेपाल आषाढ २५ २०७७
काठमाडौं । आफ्नो कुर्सी धरापमा परेपछि पार्टीका भ्रातृसंगठन अखिल, युवा संघका कार्यकर्तालाई बोलाएर सडकमा आन्दोलन गर्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि हरेक दिनजसो सडकमा प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा जुलस र र्याली निस्किरहेको छ ।
कोरोना महामारीका कारण देश लकडाउनमा छ । जनता लकडाउनमा बसेको एक सय सात दिन बितेको छ । हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । सार्वजनिक सवारीसाधन चलेका छैनन् । उद्योग व्यवसाय चौपट छ । काठमाडौं उपत्यकामा हरेक दिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा निस्कको जुलुस हेर्दा देशमा कोरोना महामारी छैन कि भन्ने लाग्छ ।
जनतालाई घरभित्र थुनेर प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो कुर्सी बचाउन लागिपरेका छन् । पार्टीमा नेतृत्वको विषयले घरझगडा चर्केको छ । आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन प्रधानमन्त्रीले भएजति सबै विकल्प प्रयोग गरिरहेका छन् । तर, पनि अहिलेसम्म स्थायी कमिटीको बैठक बस्न सकेको छैन । ओली र प्रचण्डबीच सहमति जुटेको छैन ।
सडकमा हरेक दिन निस्किरहेको जुलुसले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ । सोही कारण अहिले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रश्न गर्न थालेका छन्, ‘सडकमा जुलुस निकाल्ने भए लकडाउन किन प्रधानमन्त्रीज्यू ?’
आषाढ २५, २०७७ बिहिवार ०९:४७:०० बजे : प्रकाशित
काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई अस्थिरतामा जानबाट रोक्न प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ बाटोमा सरकार गएको बताएका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) को विहिबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताए ।
अराजनीतिक तथा अराजक प्रबृत्ति अहिले किनारा लागेको बताउदै अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र शुद्धीकरणको काम भएको बताए । सरकारलाई काम गर्न नदिने अहिलेका नेता नै विगतको आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढालेको उनले आरोप लगाए ।
ओली छिटो मर्ला र खाउँला कुरेर बसेकाहरु भ्रममा रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “भर्खर त मेरो बुवा बुढो हुन थाल्नुभएको छ, म त अहिले जवान नै छुँ, मर्ला र खाउँला नसोचे हुन्छ ।” कसैले मलाई कमजोर छ ठानेमा त्यो भ्रम हुनेछ उनले भने ।
चितवनमा जनतालाई ‘प्रणाम’ गरेर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई चुनाव जिताए पनि ‘गुन’ बिर्सेको उनले बताए । “जङ्गलमा आफू प्रचण्ड बस्नुभएको छैन, लडाकुलाई बसाउनुभयो” उनले थपे, “आफू प्रचण्ड त दिल्ली लखनउमा जेलवाला तेल लगाएर जुल्फी कोरेर बस्नुभयो ।” आज देश दोबाटोमा भएकाबेला कार्यकर्ता र जनतालाई चिन्ता हुनु स्वभाविक भएपनि अहिले पार्टी पहिलेभन्दा बढी एकतावद्ध बनेको बताए।
अहिले पार्टी गतिशील र अनुशासित बनेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष ओलीले थपे, “पार्टी पार्टीजस्तो थिएन, च्याउँच्याउँ र म्याउँम्याउँ थियो, अहिले एकतावद्ध र अनुशासित बनेको छ ।” अहिले देशको पक्षमा काम गर्न थप सहज भएको उनले बताए । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन अब सहज भएको प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले तर्क गरे ।
उहाँहरुलाई समाजवाद आइसक्यो, परिवार आफन्तले सबै सुख सुविधा प्राप्त गरिसके प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हामीलाई र नेपाली जनताका लागि भने समाजवाद आउन बाँकी रहेको छ, त्यसकालागि हामी संघर्ष गरिरहेका छौं ।” जनयुद्धमा लडेका लडाकु, घाइते, अङ्गभङ्ग भएका पीडितकालागि समाजवाद आउन बाँकी रहेको उनले चर्चा गरे ।
सरकार देश र जनताको पक्षमा काम गरिरहेकाले देशहित नचाहने तत्वहरु सल्बलाएको उनले टिप्पणी गरे। जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि देश र जनताको पक्षमा सरकारले काम गर्ने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । युवालाई रोजगारी दिन सरकारले उद्योग कलकारखानादेखि अन्य रोजगारमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए ।
नेपालमा मजदुर आन्दोलनलाई केहीले विभाजित गर्ने प्रयास भएको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष ओलीले मजदुरलाई सही दिशा देखाएर एकतावद्ध बनाउनुपर्ने बताए । “केही तत्वले मजदुर साथीहरुलाई झुठा सपना बाँडेर अल्मल्याएका छन्, उहाँहरुलाई मुक्त गराएर सही बाटोमा लग्नुपर्छ” अध्यक्ष अ‍ोलीले थपे, “श्रमिकको नाम लिएर नथाक्नेहरु श्रमिकको शोषण गरिरहेका छन्, त्यसबाट सचेत रहनुपर्छ ।”
“एउटा पक्षले अदालतमा मुद्दा हालेको हाल्यै हुनुहुन्छ, वकिलहरुले पनि राम्रो काम पाउनुभएको छ” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हामी झगडिया होइनौं, त्यसैले अदालतमा मुद्दा हाल्न पनि जाँदैनौं ।” एक पल्ट पनि सूर्य चिन्हमा चुनाव नलडेकाहरुले सूर्य चिन्ह आफ्नो भएको दावी गर्नु हास्यस्पद भएको उनले टिप्पणी गरे।
“दशा लागेपछि के लाग्छ बरु यही बसेको भए पार्टी एकजुट हुन्थ्यो, पार्टी सानदार ढङ्गले जित्थ्यो” प्रधानमन्त्री ओलीले भने । पालिकास्तरमा ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारले तयारी गरेको बताउदै प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रो उद्योग, उत्पादन र निर्यातबाट देशमा समृद्धि कायम गर्ने बताए ।
देश बनाउने सरकारको अभियानमा सबै नेपालीले साथ दिनुपर्ने उनले आग्रह गरेका छन् । सरकार समानता र सम्मानको पक्षमा काम गरिरहेको चर्चा गरे । “अब सामन्तवादका दिन गए, यो जनताको दिन हो, जनताका छोराछोरी नै नेतृत्वमा पुग्छन्” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्याय र समानताको महाअभियानमा लागेका छौं ।” मजदुर श्रमिकहरु कुनै अलमलमा नपरी महाअभियानमा लाग्न उनले आग्रह गरे। समाचार: गोरखापत्र अनलाइन
माघ १५, २०७७ बिहिवार १९:२१:३२ बजे : प्रकाशित
जनताको बहुदलीय जनमतको मुद्दालाई प्रधानमन्त्री ओलीले कुल्चिए - योगेश भट्टराई
इलाम - नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका नेता योगेशकुमार भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गल्ती स्वीकारेमा एकता सम्भव भएको बताएका छन् ।
बिहिबार इलाममा नेकपाका कार्यकर्तासँगको छलफलमा भट्टराईले सो कुरा बताउका हुन् ।
उनले अनेक प्रयत्नबाट सम्भव भएको पार्टी एकता मूल्यवान भएको पनि बताए । उक्त छलफलमा बोल्दै उनले जनताको बहुदलीय जनमतको मुद्दालाई प्रधानमन्त्रीले नै कुल्चिएको आरोप लगाए ।
उनले कानून मान्दा, लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्वीकार्दा मात्रै जबज लागू हुने बताए । उनले आगामी फागुन १५ सम्म प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुने पनि बताए ।
उनले भने - संसद्मा पेश गरिएका कुनै पनि नीति, कार्यक्रम र बजेटमा फरक मतसमेत नराखी पारित गरिराखेकामा प्रधानमन्त्रीले पार्टीको असहयोग भन्नु गलत छ ।
माघ १५, २०७७ बिहिवार १८:०५:०९ बजे : प्रकाशित
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीद्वारा अमेरिकी समकक्षीलाई बधाई
काठमाडौँ। काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले संयुक्त राज्य अमेरिकाको विदेशमन्त्रीमा एण्टोनी ब्लिंकेन नियुक्त हुनुभएकामा बधाई ज्ञापन गरेका छन् । नवनियुक्त विदेशमन्त्री ब्लिंकेनलाई आज बधाई सन्देश पठाउँदै मन्त्री ज्ञवालीले बहुआयामिक नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध आगामी दिनमा अझ उन्नत हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासका निम्ति अमेरिकाले गरेको सहयोगको सराहना गर्दै उनले सन्देशमा बहुपक्षीयतासहितको नयाँ अमेरिकी नीतिमा दिइएको उच्च महत्वले पारस्परिक सहयोगको मार्गलाई थप विस्तार गर्ने बताएका छन् ।
कोभिड–१९ को महामारीका सन्दर्भमा विश्व स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव घटाउनेलगायत साझा हितका विषयमा अमेरिकासँग निकट सम्पर्कमा रहेर काम गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता मन्त्री ज्ञवालीले सन्देशमा व्यक्त गर्नुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उनले विकास साझेदारी, आर्थिक सहकार्य र दुई देशका जनताबीचको सम्बन्ध अभिवृद्धिका निम्ति पनि सन्देशमा जोड दिएका छन् । रासस
माघ १५, २०७७ बिहिवार १८:०५:०० बजे : प्रकाशित
# परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले
# अमेरिकी समकक्षी
बुटवलमा प्रचण्ड–नेपाल समूहको शक्ति प्रदर्शन : प्रधानमन्त्रीकोे निरंकुशतालाई ध्वस्त पार्ने चेतावनी
रुपन्देही । नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले शक्ति प्रदर्शन स्वरुपमा बुटवलमा सभाको आयोजना गरेको छ । बिहीबार आयोजित सभालाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरुले सम्बोधन गरेका छन् ।
उनीहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक कदम चालेको आरोप लगाए ।
प्रधानमन्त्री सामन्ती निरंकुशताको एजेन्ट जस्तो देखिएको भन्दै उनीहरुले केही महिनामै ओलीको निरंकुशतालाई ध्वस्त पार्ने चेतावनी दिए ।
उनीहरुले सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने बताएका छन् । यसबारे प्रचण्डले भने, ‘संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, अदालतप्रति विश्वास छ ।’
माघ १५, २०७७ बिहिवार १७:०१:१३ बजे : प्रकाशित
प्रधानमन्त्रीलाई सर्वाेच्चको आदेश : लिखित जवाफसहित आफैँ अदालतमा उपस्थित हुनू
काठमाडौं । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लिखित जवाफसहित अदालतमा आफैं उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्य र कंचनकृष्ण न्यौपानेले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी दायर रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिखित जवाफसहित अदालतमा बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
चुनावका लागि आयोगको एक्सन, ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई बोलायो
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई लक्षित गरी दिएको अभिव्यक्तिका कारण न्यायालयलाई प्रभावित गर्न खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अधिवक्ताद्वय आचार्य र न्यौपानेले मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सो रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? भन्नेबारे लिखित जवाफसहित आफैं उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
अबको कसले ल्याउला बहुमत, २०७४ को चुनावमा कसले कति मत पाएका थिए ?
साथै सोही इजलासले पूर्व प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुप शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की तथा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानालाई पनि सात दिनभित्र लिखित जवाफसहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता लोचन भट्टराई र धनजीत बस्नेतले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू रायमाझी, शर्मा, श्रेष्ठ र कार्कीविरूद्ध अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।
माघ १५, २०७७ बिहिवार १६:४६:३४ बजे : प्रकाशित
भट्टी पसल हो र नेकपा पार्टी खाली झगडा गर्न ?
काठमाडौं । जिफन्टको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्दै भने, 'के नेकपा पार्टी भट्टी पसल हो खाली झगडा गर्ने ?'
आज काठमाडौमा आयोजित नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)को कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड नेपाल समूहलाई कटाक्ष गर्दै भने, "खाली पद चाहियो भन्दै पार्टीमा झगडा गर्ने के हाम्रो पार्टी भट्टी पसल हो र झगडा गर्ने ? दुई तिहाईको सरकारलाई काम गर्न नदिएर बखेडा निकालेर के गर्न खोजेको ?"
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले सम्म आफूले कसैलाई कारवाही नगरेको त्यसैले सुध्रिएर फर्किएमा चुनावमा सूर्य चिन्हबाट लड्न दिने कुरा समेत उल्लेख गरेका छन् ।
माघ १५, २०७७ बिहिवार १५:३९:०६ बजे : प्रकाशित